UGoogle uyayibona ibug kwikhamera yePixel xa ugcina iifoto | I-Androidsis
Njengoko benditshilo izolo kwinqaku endixele ngalo ingxaki entsha yokuba uluhlu lwePixel lwalunalo phantse lonke uluhlu, ngaphandle kwesizukulwana sokuqala, isigebenga sokukhangela sisandula ukukhupha ingxelo kwi iqaphela ingxaki ekhulayo yenani labasebenzisi xa begcina iifoto abazithathileyo.
Kuyabonakala ukuba, ingxaki inxulumene xa usebenzisa itekhnoloji ye-HDR ukubamba. Ixesha lokulungiswa kwezi foto iphezulu, Ngaphandle kokuba ngaphezulu, xa kuthelekiswa nefoto ngaphandle kokucwangciswa kweposi. Ukuba ngexesha lokuqhubekeka siyaphuma isicelo sisebenzisa enye, ifoto inyamalala ngokupheleleyo kwisixhobo sethu.
Nangona i-thumbnail iboniswa kwi-reel, i-thumbnail ethi xa ucofa kuyo ingasibonisi ifoto kwaye ekugqibeleni iphele inyamalala kwisixhobo sethu. UGoogle uthumele ingxelo kwi-Engadget, ethe yakhokelela ingxelo kuGoogle malunga noku. Kule ngxelo, inkampani iyenza ukuba kwiiveki ezizayo izakusungula uhlaziyo ukusombulula le ngxaki ingaqhelekanga xa igcinwe kwi-reel.
Kwakhona unokubona ukuba isigebenga sokukhangela Ukudlula kweOlimpiki kuluhlu lwayo oluhambayo Kwaye inayo kuphela njengohlobo lovavanyo lwelebhu, kuba kungenjalo ngekhe kuthathe iiveki ezininzi ukumilisela uhlaziyo oluhambelanayo, kuba i-smartphone iye kuphela kwesixhobo esinakho ukukwazi ukuthatha zombini iifoto kunye neevidiyo zeyona amaxesha ngokweemvakalelo.
Ukuba ungomnye wabasebenzisi abachaphazelekayo, sinokucebisa kuphela ukuba xa uthatha imifanekiso ngePixel yakho, xhobisa ngomonde kwaye vumela isoftware yokwenza isebenze umsebenzi wayo ngaphambi kokucima isixhobo okanye ukutshintsha usetyenziso, ubuncinci kude kuhlaziywe ukulungiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » UGoogle uyayibona ibug kwikhamera yePixel xa ugcina iifoto
Uhlaziyo lweFirefox kwaye yongeza ukusebenza kwevidiyo yescreen edadayo